Akụkọ - Okwu mmalite nke karama egwuregwu 304
1.304 igwe anaghị agba nchara nwere ike corrosion eguzogide ma na elu price。
2. 304 igwe anaghị agba nchara na-ejikarị eme ihe na mgbagwoju gburugburu na ike corrosion eguzogide。
3. 304 dị na igwe anaghị agba nchara efere。
4. Ngwunye igwe anaghị agba nchara 304 nwere nickel, ya mere ọ naghị ajari, na 304 igwe anaghị agba nchara ma ọ bụghị nchara.
5. The thermos cup mere nke 304 igwe anaghị agba nchara nwere ihe chromium, na elu bụ matte na adịghị nchara
6.The 304 igwe anaghị agba nchara agụụ ite adịghị mfe nchara n'ihi na chromium-ọgaranya oxide guzobere n'elu nke ígwè ahụ nwere ike ichebe nchara ahụ, ka iji nweta mmetụta nke mma ọ drinkingụ drinkingụ
Egwuregwu mmiri kalama na nyo ọrụ
Obere ihe eji eme ka mmiri dị ọcha bụ karama mmiri eji egwu mmiri pụtara ọhụrụ n'afọ abụọ gara aga. Ọdịdị ya dị ka karama mmiri mmiri ọdịnala, mana nrụpụta ọrụ dị n'ime ya nwere ike ịmịcha mmiri dị iche iche dịka mmiri n'èzí, mmiri iyi, mmiri mmiri n'ime mmiri ọ drinkingụ directụ na-aga n'ihu, nke dị mma maka ọnọdụ egwuregwu n'èzí n'oge ọ bụla. Nweta mmiri ọ safeụ andụ ma doo gị anya na ebe ọ bụla.
Egwuregwu egwuregwu nkịtị
Omenala mmiri eji egwu mmiri nwere ike ịchekwa mmiri ọ drinkingụ drinkingụ maka egwuregwu.
Fkpakọba egwuregwu kalama
Obere karama mmiri na-agba mmiri, ahụ karama ahụ nwere ike apịaji mgbe mmiri isụchara mmiri ma ọ naghị ewere ohere.
Egwuregwu na-ezo aka na karama mmiri a na-eji maka oge egwuregwu ndị ọzọ siri ike, dị ka ịgba ọsọ, ịrịgo, wdg. A na-ahụwanye ya na itinyekwu aka na njiri mara na ọrụ akara ahụ.
Silicone mpịachi mmiri kalama
N'èzí were na-ezo aka n'oge ndị dị otú ahụ dị ka hiking, picnics, njem, wdg Ọ na-ji Mkpa ọkụ arọ na multiple iche nke nghọta buckles.
Enwere ike ịsị na karama mmiri dị n'èzí nke ụmụ akwụkwọ ji eme ihe yiri nke ahụ, mana n'ihi na ụmụaka na-eji ya, ọ dị iche na imewe na mmepụta site na karama mmiri ọkachamara. Egwuregwu mmiri nke ụmụ akwụkwọ ji eme ihe na-adaba adaba ma dịkwa mfe iji, dị ka Enwere ike iji ya mepee mkpuchi kama plọg ahụ.
Igwe anaghị agba nchara egwuregwu kalama
Igwe anaghị agba nchara uru: ike, ọ dịghị emerụ bekee, adịghị emerụ ndị mmadụ, okpomọkụ na-eguzogide. Ọghọm: Nmegharị otu ọkụ na-eme ngwa ngwa ma na-eguzogide ọgwụ. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara okpukpu abụọ chọrọ nhazi nhazi dị elu, na nkwonkwo na-adịkarị ọcha na mmiri na nje.